Snn Nepal ओलीले कम्युनिष्ट पार्टी ध्वस्त बनाउँदैछन् : माधव नेपाल – Snn Nepal
ओलीले कम्युनिष्ट पार्टी ध्वस्त बनाउँदैछन् : माधव नेपाल
काठमाडौं १९ चैत । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद केपीओलीले कम्युनिष्ट पार्टी ध्वस्त बचाउनतर्फ लागेको बताएका छन् । अध्यक्ष ओलीले लाखौं कार्यकर्ता र जनताको अपेक्षा विपरित झण्डै दुईतिहाइको बहुमत हासिल गर्न सफल भएको कम्युनिष्ट पार्टीलाई टुक्र्याएर विध्वंश निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाएका हुन् ।
बिहीबार कास्की जिल्ला कमिटी घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले पार्टी अध्यक्ष ओलीले विधि र पद्धतिमार्फत पार्टी सञ्चालन नगरी कम्पनीको रुपमा चलाएको आरोप लगाए । ‘पार्टीमा यो कुनै स्वार्थ र जुँगाको लडाइँ होइन, पार्टीमा स्थापित हुनुपर्ने पद्दतिको लडाइँ हो’ उनले भने । ‘हामीले उनलाई पार्टीको विधानअनुसार विधि र पद्धतिबाट सञ्चालन गर्न माग गरेका हौं । पार्टी कुनै ब्यक्तिको लहड र ब्यक्तिगत स्वार्थमा चल्न हुँदैन ।
नेता नेपालले ओलीको सर्वसत्तावादका विरुद्ध देशव्यापी समानान्तर संगठन बनाउने उद्घोष समेत गरेका छन् । उनले ओलीको ज्यादतीका विरुद्ध स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीयतामा समानान्तर समिति बनाउने बताए । नेता नेपालले तत्कालै निर्वाचन हुने अवस्था आएपनि स्थानीय निकायदेखि केन्द्रसम्मै उमेदवार उठाउने समेत चेतावनी दिए । ‘चुनाव घोषण भएको अवस्थामा हामीले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मनै उमेदवार चयन गरेर चुनावी मैदानमा उत्रन्छौं’ उनले भने । ‘चुनावमा अन्य दलहरूसँगै तालमेल गरेर सहमतिमा उमेदवारी दिन्छौं, सबै दलसँग तालमेल गरेर चुनावमा लाग्छौं ।’
उनले चुनावका लागि मोहन वैद्यदेखि मोहनविक्रम सिंहसम्म कुराकानी भएको बताए । नेता नेपालले नेकपा एमालेका ८ लाख कार्यकर्तामध्ये ६ लाखभन्दा बढी आफूहरुसँग रहेको दावी गर्दै सबैलाई कारवाही गरेर देखाउन केपी ओलीलाई चुनौती दिए ।नेता नेपालले पार्टी अध्यक्ष ओलीको पछिल्लो समयमा बढेको अहमता र घमण्डले पार्टीको साख गिरेको आरोप लगाए । ‘पार्टीमा आफैलाई सर्वेसर्वा ठान्ने प्रवृत्तिले पार्टीको शाख र गरमानै धरामा पर्यो’ उनले भने । उनले ओलीले राज्यका अंग कब्जा गरिरहेको आरोप लगाउँदै प्रतिगामी शक्तिसँग समेत साँठगाँठ गरिरहेको आरोप लगाए ।
१९ चैत्र २०७७, बिहीबार प्रकाशित
मालपोत कार्यालयमा लाइन बसेकी वृद्धाको मृत्यु
एकताका लागि तयार छौँ, तर सम्मानजनक एकता हुनुपर्छ : नेपाल
कार्यदलले तयार पार्‍यो साझा कार्यक्रम र सरकार सञ्चालन कार्यविधि
सडक विभागका पूर्व महानिर्देशक शर्माको निधन
१.	निर्धन उत्थान लघुबित्तको नाफा २२३ प्रतिशत वृद्धि हुदा प्रतिशेयर आम्दानी झन्डै ३ गुणाले बढ्यो
२.	रातिदेखि आएको बाढीले चनौटेको रातो पुल बगायो
३.	वेश्यावृत्तिमा संलग्न गराएको अभियोगमा २ महिला पुर्पक्षका लागि थुनामा
४.	क्लिनिकबाट किनेको औषधि खाएलगत्तै दिल्लीमा नेपाली दिदी-भाइको मृत्युु
५.	बढी भाडा लिने सार्वजनिक यातायातलाई कारबाही नियमित
६.	महिलाका मुद्दा उठाउँदा ‘झगडालु’ को आरोप लाग्छ सांसदलाई
७.	भारतमा थप ४१ हजारमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
८.	एकै परिवारका तीन कोरोना संक्रमितको मृत्यु, गाउँ सिल
९.	कुलमानलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन
१०.	अब खोप प्रमाणपत्र कन्सुलर प्रमाणीकरण गर्नु नपर्ने